အပူ splicing များအတွက် Conveyor ခါးပတ် vulcanizing စာနယ်ဇင်း
vulcanization ပူးတွဲစက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုမြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသောအလူမီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောလျှပ်စစ်သေတ္တာများတပ်ဆင်ထားပြီး 0-2Mpa ဖိအားရှိပြီး၎င်းသည်ဖိအားစနစ်မှဖိအားပေးမှုများရှိသဖြင့်အလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်ပြီးသယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်အပူပေးဒြပ်စင်အားဖြင့်အပူပေးသောကြောင့်အပူမြင့်မားမှုနှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအပူချိန်တို့ဖြင့်တည်ငြိမ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
1. vulkanization ဖိအား 1.0-2.0 MPa;
2. vulcanization အပူချိန် 145 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်;
vulcanized ပန်းကန်၏မျက်နှာပြင်အပူချိန် 3. ခြားနားချက်±2° C;
4. အပူချိန် (ပုံမှန်အပူချိန်မှ ၁၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ) ၂၅ မိနစ်၊
5. ဗို့အား 220V / 380V / 415V / 440V / 480V / 550V / 660V, 50 / 60HZ,3အဆင့်;
6. အပူချိန်ညှိနှိုင်းမှုအကွာအဝေး:0မှ 199 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်;
၇။ အချိန်ကုန်ချိန်ညှိမှုအကွာအဝေး - ၀ မှ ၉၉ မိနစ်၊
လေထုဖိအားရေ vulcanization စက်အအေး
၁) ZJL အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သောအကွက်တပ်ဆင်ထားသည်။ အလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်မှုပြတ်တောက်လျှင်၊ သင်သည် manual control mode သို့ပြောင်းနိုင်သည်။
2) ဂန္ထဝင်မြင့်မားသောဆန့လူမီနီယံအလွိုင်း။ ဖိအား 2Mpa သို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်မမြင်ရသောပုံသဏ္createsာန်ကိုသာဖန်တီးသည်။
၃) ကြာရှည်ခံနိုင်သောသံမဏိညှပ်စက်၊ အထူးတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်း၊
၄) လျှပ်စစ်ရေစုပ်စက်၊ အချိန်နှင့်ချွေတာနိုင်အောင် vulkanizing ဖိအားကိုထိန်းချုပ်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသော conveyor belting project များအတွက်လေထုဖိအားစနစ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
၅။ ဖိအားပေးကိရိယာသည်ရော်ဘာဖိအားအိတ်ကိုအသုံးပြုပြီးအလေးချိန် ၈၀% ကိုရိုးရာ platen ထက်လျှော့ချသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောရာဘာဆီးအိမ်သည်တူညီသောဖိအားနှင့်ထိရောက်မှုမြင့်မားသည်။ ၎င်းသည်ဖိအား ၂.၅ MPa ကိုစစ်ဆေးခြင်း၏စမ်းသပ်မှုကိုကျော်လွန်ပြီးလူကြိုက်အများဆုံးဖိအားစနစ်ဖြစ်လာသည်။
၆) Almex အမျိုးအစားအပူစောင်၊ အပူပြားတစ်လုံးလုံးကိုအလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အထူသည် ၂၅ မီလီမီတာသာရှိပြီးအလေးချိန်ကိုလျှော့ချပြီးစွမ်းအင်ကိုသက်သာစေသည်။ အခန်းအပူချိန်မှ ၁၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့တက်ရန်မိနစ် ၂၀ ခန့်သာလိုအပ်သည်။
၇။ ၁၄၅ ံမှ ၇၀ water မှရေအေးစနစ်ကိုထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပြီး ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်သာလိုသည်။
အပိုင်းခါးပတ် vulcanizing စာနယ်ဇင်း ZLJ စီးရီးအကြီးစား - အမျိုးအစား
အမျိုးအစားသစ် Vulcanizing Press သည်အလေးချိန်လေးသော vulcanizer တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဖိအားအိတ်၊ စံအပူပြားနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာပါရှိသည် travers bars စသည့်ဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။
splicing အတွက် DB-G အမျိုးအစားသံမဏိကြိုးသယ်ဆောင်ခါးပတ် Peeling စက်
DB-G အမျိုးအစားသံမဏိကြိုးသယ်ယူစက်ခါးပတ်အစက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအားဖြင့်လွတ်လပ်စွာသုတေသနပြုပြီးတီထွင်ထားသောသံမဏိကြိုးသယ်ဆောင်စက်ခါးပတ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားသည်။ သာမန်အမျိုးအစားနှင့်ပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်နိုင်သောအမျိုးအစား။ ၎င်းသည်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်လုပ်အားအင်အားနည်းသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောသံမဏိကြိုးပေါ်သုတ်စက်များကဲ့သို့သောအခွံများကိုပြီးအောင်ဖြည့်နိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးသောသံမဏိကြိုးသယ်ဆောင်စက်ခါးပတ် vulcanization joints များအတွက်အသုံးအများဆုံးအရန်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုသည်။ ပြည်တွင်းမူရင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ ဦး ဆောင်။
အမျိုးမျိုးသောသံမဏိကြိုးပေါ်ကိုခါးပတ်များ၏အဖုံးရာဘာ၊ အနိမ့်အဖုံးရော်ဘာ၊ အမာခံရော်ဘာနှင့်သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုးများအကြားခွဲခြားမှု။
Belt Vulcanizing Press Machine အတွက်ရော်ဘာဖိအားအိတ်
Antai ရော်ဘာဖိအားအိတ်သည်ရော်ဘာဒီဇိုင်းအပြည့်အစုံကိုအသုံးပြုသည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်၊ ပေါ့ပါးပြီးဖိအားကိုညီမျှစွာ၊ ၎င်းသည်ရေဖိအားနှင့်လေဖိအားနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် Antai ၏ကိုယ်ပိုင် R&D စင်တာမှသီးခြားစီတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအမျိုးမျိုးသောစျေးကွက်အမျိုးမျိုးတွင်အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုများစွာတန်ဖိုးထားသည်။ Almex vulcanizing press များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဌာနသည် (၅) နှစ်ကြာခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ရာဘာဖိအားမြင့်ရေရေအိတ်များကိုအောင်မြင်စွာတီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤတော်လှန်ရေးနည်းပညာသည်သန္ဓေတားစက်များအား vulcanizing press technology အားလုံးမှောက်ပြီးခေတ်ဟောင်း vulcanizing press hydraulic plate ကိုအစားထိုးလိုက်သည်။ ပူးတွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုအသစ်တစ်ခုကိုအမြင့်ရောက်ရှိ။ “ ANTAI” vulcanizing machine သည်၎င်း၏အဓိကနည်းပညာနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောစျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်ထိပ်တန်းနေရာတွင်ရှိသည်။
ရော်ဘာသယ်ဆောင်ခါးပတ် Splicing ကော်အဘို့အအေးဘွန်းဘိလပ်မြေ
Antai TM 2020 Cold Bond Cement သည်ဂျာမန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ပုံသေနည်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ရော်ဘာတင်စက်ခါးပတ်ချိတ်ခြင်းနှင့်ချိတ်ခြင်းများအတွက်လျင်မြန်စွာကုသနိုင်သောဘိလပ်မြေဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်မြေအောက်တောင်မှခါးပတ်ကြိုးတပ်ခြင်း၊ ချွန်ခြင်းနှင့်ရာဘာလုပ်ခြင်းအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးသောကော်ဖြစ်သည်။
TM 2020 Cold Bond Cement ကိုအသုံးပြုနေစဉ်၎င်းကိုကောင်းမွန်စွာပြီးစီးရန်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းလိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာအခန်းအပူချိန်သည်ရော်ဘာအရည်ကော်ပေါ် အခြေခံ၍ ကလိုရိုဖန်းကိုကုသပေးသည်။ ဒုတိယအချက်မှာသင့်လျော်သောမာကျောသောပမာဏနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်အပူ၊ ဖိအားနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများမပါဘဲမြင့်မားသောစွမ်းအားကိုစွဲစေနိုင်သည်။ TM 2020 Cement သည်ရော်ဘာများကိုသတ္တု၊ ရာဘာနှင့်ရာဘာ၊ ရာဘာနှင့်ဖိုက်ဘာမှန်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရာဘာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၎င်းသည်ရော်ဘာအစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊
ရာဘာမှရာဘာ၊ ရာဘာ၊ ရာဘာ၊ ရာဘာသို့ဖိုက်ဘာ၊ ရာဘာစသည့်လုပ်ငန်းများတွင် TM 2020 Cold Bond Cement သည်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရော်ဘာသယ်ဆောင်စက်ခါးပတ်ပြုပြင်ခြင်းအတွက် Edge Repair vulkanizing Press
ရော်ဘာသယ်စက်ခါးပတ်အတွက်စက်ကိရိယာဖြစ်သော Edge Repair vulkanizing Press သည်အဓိကအားဖြင့် conveyor belt ၏သေးငယ်သောနေရာများ၊ အပေါက်ဖောက်ခြင်းပျက်စီးခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ရှည်လျားသောteရိယာမျက်ရည်များနှင့်ပျက်စီးခြင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်၊ ခြစ်ရာပြုပြင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း။ စသည်တို့သည်ပူပြင်းသော vulcanization ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သယ်ဆောင်သည့်ခါးပတ်များကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြုပြင်ရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ ဒါဟာ’site ပေါ်တွင်ပေါ်ကိုခါးပတ်ပြုပြင်ရန်အလွယ်တကူ s ။ ဒါဟာ’အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း၊ အကျိုးရှိစွာနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း။
Thermoplastic Belt Splice အတွက် PU PVC Belt Vulcanizing Press
ဒီလေအေးစက်တဲ့စာနယ်ဇင်းမှာအစိတ်အပိုင်းအားလုံးပါ ၀ င်ပြီး tool တစ်ခုတည်းမှာပေါင်းစပ်ထားပြီးစက်ကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီးအလုပ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေသည်။ မြန်ပြီးအိတ်ဆောင် splicing, သင်ကဘယ်နေရာမှာမဆိုအလွယ်တကူယူဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။
ပေါ့ပါးသောရော်ဘာသယ်ယူစက်ခါးပတ်အတွက်ပေါ့ပါးသော vulkanizing Press
ပေါ့ပါးသောရော်ဘာပေါ်သွပ်ကြိုးကြိုး vulcanizing press, ၂ ပိုင်းစာနယ်ဇင်း၊ လူမီနီယံဘောင်ပုံစံ၊ လျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်၊ နှစ်သက်သော splice အနေအထားသို့ပြောင်းရန်လွယ်ကူသည်။ S
အလင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်သောလူမီနီယံဘောင်နှစ်ခုတွင်စာနယ်ဇင်း၏အပေါ်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အပေါ်ဘောင်၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ခေါက်ထားနိုင်သောလက်ကိုင်နှစ်ခုဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီးအပေါ်နှင့်အောက်သို့ရွေ့လျားနိုင်သည်။ Control box တွင်အပူချိန်နှစ်ဆထိန်းချုပ်မှု၊
အစာရှောင်ခြင်းနှင့်စိတ်ချရသောခါးပတ် splicing များအတွက်ဒီဇိုင်း;
အစိုင်အခဲ လူမီနီယံဘောင် စတိုင်
၁၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၇၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိသာအအေးခံသည်5မိနစ်.